Somaliland oo safka ugu horeeya ka gashay Wadamada Afrika ee deeqaha tooska ah ka hela imaaraadka Carabta. |
Somaliland oo safka ugu horeeya ka gashay Wadamada Afrika ee deeqaha tooska ah ka hela imaaraadka Carabta.
Hargeisa(GNN):-Dawlada isku taga imaaraadka carabta ayaa Somaliland ku dartay liiska wadamada Afrika ee ay sida tooska ah u siiyaan deeqaha Horumarka ah. Wakran oo ay baahisay Wasaaradda arimaha dibada imaaraadka carabta waxay sheegtay in in deeqda Somaliland la siiyey ay qayb ka ahayd $800 milyan oo ah deeqo lagu caawinayo wadamada bariga dhexe taasoo ah deeq toos ah.
Warbixintani waxay shaaca ka qaaday in deeqahan tooska ah ee imaaraadku bixiyey labadii sanno ee la soo dhaafay (2017, 2018) oo gaadhaysay 11.52 milyan oo doolar 2.58 ka mid ah ay bixisay Dawlada boqortooyada Sucuudi Arabia.
Warbixintan oo ku qornayd luuqada ingiriisida oo aanu Afka Somaliga ku soo tarjunay, waxa lagu sheegay, in Imaaraadka carabtu ay inta badan maalgelin ku sameeyaan dhismaha warshadaha, Dekedaha, gaadiidka, bakhaaradda waawayn ee kaydka ah, dhismaha waddooyinka iyo ilaalinta deegaanka.
Boqolkiiba 39 ka mid ah Mashaariicahaasi waa maalgelin la xidhiidha Dhismaha warshadaha, 19 ka ahina waa dhismaha Dekedaha iyo Gaadiidka, halka dhismaha waddooyina, biraha iyo kimikalisu ay ka yihiin boqolkiiba 15.
Maalgelinta imaaraadka carabta ee ay Somaliland ku sammaynayaan ayaa ah dhismaha dekedaha iyo samaynta waddooyinka, taasoo qorshuhu yahay inay kordhaan shanta sanno ee soo socda.
Warbixintu waxay intaasi ku dartay, in Dawladda imaaraadka carabtu uu waddanka Somaliland ka dhigay kan hogaaminaya wadamada ay deeqaha siiyaan. Iyadoo kambaniga ku caanka ah Horumarinta dekeduha ee la yidhaa Dubai Port uu Somaliland la saxeexday heshiis lagu maalgelinayo dekeda Berbera, taasoo ku kacaya 442 milyan oo doolar oo ah balaadhin lagu sammaynayo dekeda. Arintaasi oo ah mid muhiim u ah wadanka isku taga imaaraadka carabta.
Waxana la qorsheeyey in dekeda Berbera dib u habayn balaadhan lagu sammeeyo lana qalabeeyo si ay ugu soo xidhaan maraakiibta waawayn oo ay u noqoto mid ka mid ah dekedaha ugu waawayn Afrika ee ay ku soo xidhaan Maraakiibta yimaada Afrika iyo eeshiya oo dhan.
Sidoo kale, waxa heshiiskaasi ku jira in saldhig milateri laga dhiso magaalada Berbera, kaasoo dhismihiisa la bilaabi doono bisha june ee sannadka isla markaana loogu talo galay in lagu ilaaliyo dhaqdhaqaaqa amni ee maraakiibta maraysa badda cas.
Warbixintan ay soo saartay wasaarada arimaha dibada ee isku-taga imaaraadka carabtu, waxa kale oo lagu sheegay in imaaraadku uu kor u qaadayo joogitaankeeda militariga Geeska Afrika si gacan looga geysto ilaalinta socodka ganacsiga iyada oo loo marayo Bab el-Mandeb Strait, oo ah furaha maraakiibta muhiimka ah ee loo isticmaalo booyadaha saliidda iyo maraakiibta maraakiibta kale ee u socdaalka Suez Canal. Emirati wuxuu ka socdaa Somaliland iyo Eritrea taasoo muhiimad wayn u ah imaaraadka caratab oo taageerta dagaalka Sacuudiga uu hoggaaminayo ee ka dhanka ah mucaaradka Houthi ee ku sugan Yemen.
Safiirkii hore ee Somaliland u fadhiyey Dalka imaaraadka carabta Baashe Cawil, haatana ah safiirka Somaliland ee Dalka Kenya ayaa markii uu ahaa safiirka Somaliland u fadhiya imaaraadka door muhim ah ka qaatay wada shaqaynta ganacsi ee labada wadan (Somaliland iyo imaaraadka carabta) baashe Cawil oo arinta ka hadlayay wuxu sheegay in imaaraadka carabtu, inay heshiis maalgelineed la gasho Somaliland ay timid markii ay arkeen muhiimada ay leedahay Somaliland ee isku socodka ganacsi ee geeska Afrika,
Baashe cawil, wuxu intaasi ku daray in dhismaha saldhiga milateri ee imaaraadku ka dhisayo Somaliland ay geeska oo dhan ka caawin doonto arimaha la dagaalanka budh-badeeda, kalluumaysiga sharci darrada ah iyo sunta badaha lagu daadiyo, sababtoo ah imika hor maanu haysan awood aanu arimahaasi kula tacaalno.
Waxa kale oo uu yidhi, Baashe Cawil “Maaha arrin la yaab leh in Somaliland, oo ah waddan aan weli haysan aqoonsani caalamiga ah, hadana ay noqoto wadanka Afrika maalgelinta ugu badan ka hela imaaraadka carabta, hasa yeeshee, waxay arintaasi wax badan ka sheegaysaa doorka muhiimka ah ee ay Somaliland ka ciyaarto Mandaqada.
Heshiiska dhismaha dekada iyo dhisida saldhiga milateri oo qabsoomay badhtamiha sannadka 2016kii ayaa ah deeqdii ugu balaadhnayd ee Somaliland ay ka hesho beesha Caalamka tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay Somaliland gaar uga istaagtay midawgii soomaaliya.
Waxa tarjumay Siciid Khaddar aw-cabdillaahi.
Saxafi Madax bannaan
Lifaaqan hoose, waxaad ka heli kartaa warkan oo ku qoran luuqada English-ka.